रोगबाट दुर रहन हात नमिलाऔं
काठमाडौँ — अभिवादनको प्रक्रियाअन्तर्गत ‘हात मिलाउँदा’ के हुन्छ ? सूक्ष्म दृष्टिले हेर्ने हो भने, यस्तो गर्दा एक व्यक्तिबाट अर्को व्यक्तिमा विभिन्न प्रकारका संक्रमण सर्न सक्छन् । यसरी हातका माध्यमले आएका कीटाणुले विभिन्न रोग पनि उत्पन्न गर्न सक्छन् ।
विज्ञ भन्छन् ‘धेरै बाँच्नु छ भने कुर्सी मोह त्याग्नुहोस् !
शारीरिक रूपले निस्क्रिय मान्छेको शरीर रोगको घरमा परिणत हुनसक्छ। संसारभर ६ प्रतिशत हृदयरोग र अमेरिकामा हुने ११ प्रतिशत अकाल मृत्युको कारण शारीरिक निस्क्रियता नै भएको अनुसन्धानले देखाएको छ।
शेर्पाको पहलमा दुर्गममा ‘स्वास्थ्य केन्द्र’
ओखलढुंगा । ५ वर्ष अघिसम्म सिद्धिचरण नगरपालिका वडा नं. ६ जन्तरखानीस्थित रहेको दुर्गम गाउँ दम्मारका बासिन्दाले स्वास्थ्य सेवा विरलै पाउँथे ।
एउटा घतलाग्दो कथा छ । एकादेशमा एक राजा थिए । उनलाई रोग लाग्यो । धेरै वैद्य-चिकित्सकलाई देखाए । तर, कसैले उनको रोग निको पार्न सकेनन् । यस्तैमा एक वैद्यले सल्लाह दिए, ‘राजालाई त्यस्तै वातावरणमा निको हुन्छ, जहाँ हरियो नै हरियो होस् ।
काठमाडौं (शेर्पाखबर) । उप्रधान तथा स्वास्थ्य मन्त्री उपेन्द्र यादवले स्वास्थ्य सेवा सबैको पहुँचमा पुर्याउने बचनबद्धता जनाएको छ । नेपाल मै पहिलो पटक त्रिवि शिक्षण अस्पतालबाट सफल मृगौला प्रत्यणरोपाण सेवा प्रारम्भको दशौं बार्षिक उत्सव कार्यक्रममा प्रमुख अतिथिको आसनबाट उपप्रधानमन्त्री यादवले यस्तो प्रतिबद्धता जनाएको हो ।